22nd Anniversary Message | Access Spectrum
၂၀၂၀ ခုနှဈ စကျတငျဘာ ၂၄ ရကျနေ့ မှာဆိုရငျဖွငျ့ Access Spectrum တညျထောငျခဲ့တာ ၂၂ နှဈ ရှိသှားပါပွီ။ ဒီ ၂၂ နှဈအတှငျးမှာ စီးပှါးရေး နဲ့ အိုငျတီလုပျငနျးတှေ နိမျ့မွငျ့တကျကြ အခွအေနတှေေ အမြိုးမြိုးကိုကွုံတှခေဲ့ရပွီး အခွအေနေ ကောငျးတဲ့ရကျတှလေဲ ရှိခဲ့သလို သိပျမကောငျးတဲ့ရကျတှလေဲ ရှိခဲ့ပါတယျ။
အိုငျတီနညျးပညာ အထောကျအကူနဲ့ မိမိပတျဝနျးကငျြ အသိုငျးအဝိုငျးကလူတှရေဲ့ ဘဝကို ပိုမိုကောငျးစတေဲ့ တိုးတကျမှုအပွောငျးအလဲတှကေို လုပျပေးနိုငျခဲ့တာတှကေို ပွနျတှေးမိတဲ့အခါတိုငျး ကြှနျတျောတို့ ဝမျးသာကွညျနူးရပါတယျ။ ဒီလို လုပျပေးခှငျ့ရလို့လဲ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကုမ်ပဏီအဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့ မိသားစုမြား၊ ဝယျယူအားပေးကွသူမြား၊ စီးပှါးရေး မိတျဖကျမြား နဲ့ အိုငျတီလုပျငနျးထဲမှ ကုမ်ပဏီမြားကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
ဒီနှဈမှာဆိုရငျဖွငျ့ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ ကိုဗဈ၁၉ ရောဂါကို တကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ ရငျဆိုငျနကွေရပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့အားလုံးကို ပွောငျးလဲသိရှိစလေိုကျတာ ကတော့ ကြှနျတျောတို့လူသားတှဟော တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျကွား ဘယျလောကျတောငျ အပွနျအလှနျ ဆကျသှယျမှီခိုနကွေတယျ ဆိုတာပါပဲ။
အဆိုးထဲကအကောငျးလို့ ဆိုရမလားပါပဲ။ ကိုဗဈ ၁၉ ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့တှရေဲ့အလုပျခှငျထဲက လုပျဆောငျမှုပုံစံတှဟော နှဈပေါငျးမြားစှာ ပွုလုပျရနျ ကွနျ့ကွာနတေဲ့ ဒီဂဈြတယျအသှငျသို့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာပငျ ခုနျကူး ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဆောငျလာကွတာကို မွငျတှလေ့ာရပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး လုပျငနျးတှေ အသှငျကူးပွောငျးလာတဲ့ ခရီးစဉျတဈလြှောကျမှာ အိုငျတီကုမ်ပဏီ တဈခုအနဖွေငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ customer မြားကို အတူတကှ ပူးပေါငျးပါဝငျ ကူညီခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျလညျး အလှနျပငျ ကြေးဇူးတငျမိပါတယျ။
ယခုလို လိုအပျနတေဲ့အခြိနျတဈခုမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမြားအကြိုးဆောငျရှကျမှု အနဖွေငျ့ ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါကို အတူတကှ တိုကျဖကျြနိုငျဖို့ အတှကျကိုလညျး လူမှုရေး၊ ကနျြးမာရေး အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အတူ ကိုယျစှမျး ဉာဏျစှမျးရှိသလောကျ လိုအပျသညျမြားကို ကူညီပေးလကျြရှိပါတယျ။
ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါဆိုးကွီးကို အတူတကှ ကြျောဖွတျနိုငျကွပွီး အားလုံး ကနျြးကနျြးမာမာနှငျ့ ပွနျလညျဆုံတှနေို့ငျရနျအတှကျ ဆုမှနျခြှလေကျြ.....
၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှာဆိုရင်ဖြင့် Access Spectrum တည်ထောင်ခဲ့တာ ၂၂ နှစ် ရှိသွားပါပြီ။ ဒီ ၂၂ နှစ်အတွင်းမှာ စီးပွါးရေး နဲ့ အိုင်တီလုပ်ငန်းတွေ နိမ့်မြင့်တက်ကျ အခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အခြေအနေ ကောင်းတဲ့ရက်တွေလဲ ရှိခဲ့သလို သိပ်မကောင်းတဲ့ရက်တွေလဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အိုင်တီနည်းပညာ အထောက်အကူနဲ့ မိမိပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေရဲ့ ဘဝကို ပိုမိုကောင်းစေတဲ့ တိုးတက်မှုအပြောင်းအလဲတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်တွေးမိတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ပေးခွင့်ရလို့လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် မိသားစုများ၊ ဝယ်ယူအားပေးကြသူများ၊ စီးပွါးရေး မိတ်ဖက်များ နဲ့ အိုင်တီလုပ်ငန်းထဲမှ ကုမ္ပဏီများကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကို တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ပြောင်းလဲသိရှိစေလိုက်တာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကြား ဘယ်လောက်တောင် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှီခိုနေကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဆိုးထဲကအကောင်းလို့ ဆိုရမလားပါပဲ။ ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲက လုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ရန် ကြန့်ကြာနေတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်သို့ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် ခုန်ကူး ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်လာကြတာကို မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ငန်းတွေ အသွင်ကူးပြောင်းလာတဲ့ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ အိုင်တီကုမ္ပဏီ တစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer များကို အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ယခုလို လိုအပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အများအကျိုးဆောင်ရွက်မှု အနေဖြင့် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကို အတူတကွ တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ အတွက်ကိုလည်း လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဆိုးကြီးကို အတူတကွ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပြီး အားလုံး ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ရန်အတွက် ဆုမွန်ချွေလျက်.....
It has been 22 years since we started Access Spectrum. During this time, we have experienced the ups and downs of the economy and the industry in Myanmar, and worldwide.
A big thank you to all our staff members and their families, our customers, partners and players in the industry.
This year is unique as we are going through the COVID-19 pandemic worldwide. It has changed all of us as never before in our generation and has made us realize how interdependent we are on each other.
COVID-19 has forced organizations and individuals to change the way work is done and has accelerated the need for Digital Transformation. In this endeavor, we have been fortunate enough to have been able to support organizations in speeding up their digital transformation processes.
During this time of need, our philanthropic arm has increased its support to the community, healthcare professionals and first responders in the fight against COVID-19.
May all of you stay safe and healthy!
Access Spectrum Team